Global Voices teny Malagasy » Voasakana any Gambia ny Chat Viber? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Avrily 2019 21:44 GMT 1	 · Mpanoratra Demba Kandeh Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Gambia, Fidirana, Fitsipika, Mediam-bahoaka, Fitantanana-aterineto, GV Mpisolovava
NICE, foibe fampandrosoana ny TIC (Teknolojian'ny Fampitambaovao sy ny Fifandraisandavitra) ao Tabokoto, Gambia. Sary avy amin'ny Green Africa Directory.
Toa nilaza ankolaka ireo loharano akaiky ny Orinasan'ny Fifandraisandavitra ao Gambia (GAMTEL) fa manembatsembana ny tolotra fiantsoana sy fifandefasan-kafatra maimaimpoana, Viber, ny governemanta. Tamin'ny volana Aprily 2013, nanambara ny fanakanana ny Viber, ireo vohikala fitadiavan'olontiana, sy ireo tolotra VoIP toy ny Skype any amin'ireo kafe ho an'ny daholobe ny Sampandraharaham-panjakàna Mpandindra ireo Fitaovana Fampiasan'ny Vahoaka, mihevitra azy ireo ho ”tsy ara-dalàna”. Saingy haingana izany vaovao izany dia notoherin'ny Ministeran'ny Filazambaovao sy ny Teknolojian-tserasera, izay nilaza fa tsy nosakanan'ny governemanta ireo tolotra ireo.
Ankehitriny, efa ho herintaona taorian'io, mitatitra olana mikasika ny fampiasàna ilay tolotra maimaimpoana ireo mpampiasa Viber. Naneho hevitra mikasika izany  ho an'ny vohikalam-baovao Gambia Affairs i Lamin Camara, Sekretera Lefitra Maharitra ao amin'ny Ministeran'ny Teknolojia Fampahalalambaovao:
[Raha toa ka] afaka mamolavola rindrambaiko amin'ny fomba maimaimpoana ary mampiasa izany ny olona iray, raha manilika ireny mpandraharaha ireny ho any ivelan'ny raharaham-barotra ianareo, dia tsy afaka ny hampiasa izany tolotra maimaimpoana izany intsony satria misy olona mampiasa vola amin'ny sehatra iray hahafahanao mampiasa izany tolotra izany.
Mihevitra aho fa tokony ho amin'ny endriny iray manontolo no fomba hijeren'ny vahoaka an'ilay toedraharaha. Tsy tonga eto mba hanohana ny zavatra mety ho nitranga aho, fa ao anatin'ny fiheverantsika fa tsy tombontsoa lehibe ho antsika izany, mila mandinika tsara mikaska ilay toe-javatra iray manontolo isika.
Nilaza ny manampahefana faran-tampony ao amin'ny governemanta fa nitambatra ho vondrona ireo mpanome tolotra ara-pifandraisan-davitra (”mpandraharaha”) saingy tsy nitanisa ireo mpamatsy sasany . Nanohy izy:
Tsy misy idirany amin'ny Sampandraharaha Mapndrindra Ny Tolotra Ho An'ny Vahoaka (PURA) ny fanakanana ny Viber, eo anivon'ireo mpandraharaha no misy ny fanakanana. Tsy manondro mpandraharaha na iza na iza aho. Fantatro fa misy tolotra hafa voakitiky ny Viber ary tsy tsara ho azy ireo izany. Miara-miasa izahay mba hijerena ny fomba hahazoana vahaolana tsara indrindra ho an'ny rehetra, ho eken'ny andaniny sy ny ankilany.
Na izany aza, nolavin'i Camara teo aloha ny hoe nanakana ilay varavarana aterineto Viber ny governemanta. Raha miresaka mikasika ny The Standard  tamin'ny 27 Martsa, nilaza ilay tomponandraikitra fa tsy nosakanana ilay tolotra, nanamarika fa izy tenany aza nampiasa izany andro vitsivitsy teo aloha mba hiresahana tamin'ny fianakaviany any Etazonia.
Niombon-kevitra tamin'ilay fanapahankevitra hanakanana ny Viber noho ny antony ara-toekarena ny mpaneho hevitra, Arfang Bobb:
[…] ara-teknika, ratsy ho an'ny toekarena izany satria tsy hividy karatra fahana intsony ny olona mba hanaovana antso iraisam-pirenena ary hihena be ny fifandraisana anaty. Alaivo ohatra ny fividianana 50Mo sy ny firesahana amin'ny Viber mihoatra ny adin'ny iray. 30 dalasis fotsiny [vola gambiana] no aloanao raha oharina amin'ny resaka ataonao raha mividy karatra fahana.
Miahiahy ireo mpandinika sasany fa, miaraka amin'ireo fanamby ara-toekarena, mametraka olana ara-politika ho an'ny governemanta Gambiana ny sehatra manome tolotra fiseraserana maimaimpoana amin'ny aterineto. Araka ny Index On Censorship , toa nanely feo ny tomponandraikitra sasany tao amin'ny governemanta fa manampy ireo haino aman-jery an-tambajotran'ireo gambiana any ampielezana mba hizara vaovao amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ireo mpanao gazety sy mpikatroka tsy miankina ny fampiasana tolotra toy ireny.
Nilaza  i Sam Phatey, mpandinika ny Fitsikilovana:
[N]a dia tsy nanome antony hanakanana ny Viber aza ny governemanta, mampahatsiahy ilay fandraràna napetraky ny governemanta Saodiana tamin'ny fampiharana maro toy ny BB Messenger, ary vao haingana, ny Viber sy Skype ilay fihetsiny, nilaza fa tsy mifanaraka amin'ny fitakiana ara-pitsipika ao amin'ny firenena amin'ny lafiny fampahalalambaovao sy serasera ireo fandefasana simaiso sy fampiharana VoIP. Toa mahatsiaro tena ho tsy voaaro sy matahotra ny governemanta Gambiana satria mampiasa ilay tolotra mba hanaovana tetika sy hifandraisana amin'ireo vahoaka ao amin'ny firenena [ireo feon'ny fanoherana].
Araka ny voalaza tao amin'ny Tatitra Avy Amin'ny Olontsotra Mpampiasa Aterineto  an'ny Global Voices, tsy afaka niditra tamin'ny Aterineto  nandritra ny 48 ora i Gambia tamin'ny herinandro lasa teo, araka ny loharano maro samihafa. Nilaza ny mpahay toekarena, Sidi Sanneh, izay nanao ny asa maha-minisitry ny raharaham-bahiny tao amin'ny firenena tany amin'ny tapaky ny taona 2000 tany, fa vokatry ny ezaky ny governemanta amin'ny fanakanana ireo fampiharana firesahana sy fiantsoana, izay ahitana ny Viber, ilay fahatapahana.
Nosokajiany ho ilay ”fihetsika manondranondrana an'ny didy jadona vokatry ny fahatongavan-tsain'ny vahoaka amin'ny governemanta mpamoritra sy mpanao kolikoly” izany.
Nandà ny filazana azy ho manakana  ny fidirana amin'ny Viber ny Minisitry ny Teknolojian'ny Fampahalalambaovao ao Gambia, mampifandray ilay olana amin'ny faharatsian'ny fifandraisana an-tambajotra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/22/136656/
 nanambara : http://www.itwebafrica.com/ict-and-governance/375-gambia/230924-skype-viber-and-online-dating-illegal-in-gambia
 nilaza fa : http://frontpageinternational.wordpress.com/2013/04/23/the-gambia-clarify-internet-communication-restrictions/
 Naneho hevitra mikasika izany: http://gambiaaffairs.com/?p=456
 The Standard: http://standard.gm/site/news/3011-Government-has-not-blocked-Viber.html
 Index On Censorship: http://www.indexoncensorship.org/2014/03/gambia-internet-cuts-social-media/
 Tatitra Avy Amin'ny Olontsotra Mpampiasa Aterineto: http://www.slate.com/blogs/future_tense/2014/03/26/netizen_report_48_hour_internet_blackout_hits_gambia.html
 tsy afaka niditra tamin'ny Aterineto: http://sidisanneh.blogspot.com/2014/03/gambia-without-internet-service-for-48.html